Tale jeneralin'ny Vietnam ny Vietnamianina tokana amin'ny lisitra 100 mahery indrindra an'ny vehivavy manerantany amin'ny taona 2019
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Tale jeneralin'ny Vietnam ny Vietnamianina tokana amin'ny lisitra 100 mahery indrindra an'ny vehivavy manerantany amin'ny taona 2019
Airlines • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Ny filoha & CEO af Vietjet, Ms Nguyen Thi Phuong Thao dia notanisain'i Forbes ho ao amin'ny lisitry ny vehivavy 100 mahery indrindra eran-tany 2019 avy amin'i Forbes, taorian'ny nampidirany ny lisitry ny vehivavy matanjaka indrindra any Azia. Ramatoa Nguyen Thi Phuong Thao no hany vehivavy misolo tena an'i Vietnam mandritra ny telo taona misesy.
Hatramin'ny 13 Desambra 2019, Forbes dia nanombana fa ny totalin'ny fananan'ilay CEO jeneralin'ny olom-pirenen'i Vietjet dia $ 2.7 miliara dolara, izay mahatonga azy ihany koa vehivavy vietnamiana ao amin'ny lisitry ny miliardan'ny Forbes 'Dollar. Ramatoa Nguyen Thi Phuong Thao ihany koa no mitana ny sokajy Sovico Group, HDBank ary orinasa maro hafa.
Ny lisitry ny vehivavy matanjaka indrindra eto an-tany Forbes, dia misy vehivavy amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha, fitantanam-bola, haino aman-jery, politika, sehatry ny fiaraha-monina / asa soa / ONG ary sehatra teknolojia. Ny laharana fanao isan-taona dia mifototra amin'ny sokajy marobe toy ny kalitaon'ny fananana, fampahalalam-baovao, fizarana ary fitaomana iraisam-pirenena.
Ny laharana faha-1 ao amin'ny lisitr'i Forbes amin'ny taona 2019 dia ny Kansera Alemanina - Angela Merkel, arahin'ny Tale Mpitantana ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena - Christine Lagarde, filohan'ny Antenimieram-pirenena amerikana - Nancy Pelosi sy Melinda Gates.